कसरी ल्याउन सकिन्छ जीवनमा वास्तविक शान्ति ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७८, बुधबार ०७:२५
१ मंसिर, काठमाडौं । हामी मौनताको सागरमा नगइकन मनको गागर लिएर सागरलाई पिउन खोज्यौं। यसले गर्दा सबै मानिस भ्रममा भए, उनीहरु इमोसनल्ली असन्तुलित भए। उनीहरु फिजिकल्ली, मेन्टली, इन्टिलिजेन्ट्ली र स्प्रिचुअल्ली हार्मोनाइज्ड हुन सकेनन्, उनीहरु मेलोडाइज्ड हुन सकेनन्, सिन्क्रोनाइज्ड हुन सकेनन्।
यी सामान्य पट्का पड्किँदाखेरि त मानिस यति धेरै झस्किन्छन् भने यति धेरै बमहरु बनेका छन्, यस्ता ठूला हतियारहरु छन्, यी सबै हाम्रो विचारले निर्माण गरेका हौं। मान्छेको मनोविज्ञानलाई यस्ता युद्ध र ध्वंसले असर पार्छ, जसलाई पोस्ट ट्रम्याटिक इफेक्ट भन्ने गरिन्छ।
विचार जसलाई ‘थट’ पनि भनिन्छ, ‘थट प्रोसेस’ भनेको माइन्ड हो। नेगेटिभ थट प्रोसेस हुनेबित्तिकै ब्रेनलाई नेगेटिभ वेभ दिने भयो, साइन्सले बिटा, अल्फा, थिटा र गामा वेभको बारेमा बोलिसकेको छ। ब्रेनमा एमआरआइ गर्दा, सिटी स्क्यान गर्दा कस्तो वेभ आउँछ र यसको रेन्जले कस्तो प्रभाव गरिरहेको छ ? यसलाई हेर्न सकिन्छ। सामान्य एक्सरे गर्दा नै शरीरभित्रको धेरै कुराहरु अब्जर्भ गर्न सकिने अवस्थामा छौं हामी। हाम्रो थट प्रोसेसले नै हाम्रो सम्पूर्ण शरीर, मन, विचार, ब्रेन, व्यक्तित्व, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र र युनिभर्सलाई नै यसले प्रभाव पार्छ किनभने हाम्रो वास्तविक स्रोत त इटरनल छ।
हामी जानौं वा नजानौं, मानौं वा नमानौं, अनुसन्धान गरौं वा नगरौं, हाम्रो रियालिटी त इटरनल छ, सनातन छ अनि भास्ट छ । अनि त्यो भास्ट इटरनिटीभित्र नेगेटीभ थट उत्पन्न भयो भने त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन र जगतलाई नै प्रभाव पार्छ।
हामीले विकास भन्ने शब्द जेनेरेट गर्यौं, त्यसो गर्दा हामीले कोइल, ओइल र फोसिल फ्युलहरुलाई प्रयोग गर्न सिक्यौं। हामीले विकास भन्ने थट ल्यायौं, ठूल्ठूला पुल बनाउनुपर्छ, सडक बनाउनुपर्छ, बिल्डिङ बनाउनुपर्छ, टनेल बनाउनुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ, आदि आदि। पहिले त हामीले विकासको आइडिया ल्यायौं, विकासको आइडियाले कति कुराहरु निर्माण ग¥यो, निर्माण गरेको संरचनाले कति कुराहरुलाई प्रभाव पार्‍यो।
यो यति विशाल छ कि जति चर्चा गरे पनि जति शब्दमा ल्याए पनि कहिल्यै सकिँदैन, यसको अन्त्य छैन। यो कुरालाई हामीले अलि सामान्यीकरण गरेर मानिसलाई जन्म के हो, जीवन के हो, मृत्यु के हो, जीवन र जगतसँगको हाम्रो प्राकृतिक नियम के हो र प्राकृतिक नियमभन्दा बाहिर गएर हामीले आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको जुन कुराहरु हामीले गरिरहेका छौं, आज हामीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरु गरिरहेका छौं, हाइपरसोनिक बमहरुको कुरा गरिरहेका छौं, अनम्यान ड्रोन र प्लेनका कुराहरु गरिरहेका छौं, मार्समा बस्ती बसाउने कुराहरु गरिरहेका छौं।
अति गज्जबको कुरा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा हामी विकास गरिरहेका छौं। आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सलाई रकेट साइन्स र बायो साइन्सले सपोर्ट गरिरहेको छ। आर्टिफिसियल इन्टिलिजिेन्सलाई नर्मल तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छौं, यो त ठिकै छ। ज्ब साइन्स रकेट साइन्स र बायो साइन्स भएर जब आउँछ नि हामी कहाँ पुग्दैछौं ?
हामीले थट प्रोसेसलाई सही तरिकाले नबुझ्दा खेरि संसारका अधिकांश समस्या निम्तिएका हुन्। एटम बम त रबर्ट जे ओपनआइमरको एउटा थट हो, अल्बर्ट आइन्सटाइनको थट हो, एटम बम कसरी बनाउनेरु युरेनियम, प्लुटुनियमलाई कसरी प्रोसेसिङ गर्ने रु त्यसलाई कसरी बमको रुपमा रुपान्तरण गर्ने ? यो त पहिले आइडिया हो नि, थट हो नि !
आइडिया र थटले हामीले जुन संसार हामीले निर्माण गरिरहेका छौं, आइफल टावर बनाउने त आइडिया हो नि ! त्यसले गर्दा हामीले यो थट अनि माइन्डको प्रोसेसलाई जबसम्म कन्ससनेस र मौनताबाट सञ्चालन गर्न सक्दैनौं, तबसम्म विचार हाम्रो शत्रु बन्छ। विचारलाई मानिसले जबसम्म मित्र बनाउन सक्दैन, तबसमम्म मानसिक, इमोसनल र ग्लोबल रुपमै समस्या आउँछ।
( योगगुरु ब्रह्मश्री मित्रसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )